Ny fiainana navotana - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Ny fiainana navotana
Inona no dikan’ny hoe mpanara-dia an’i Jesosy? Inona no dikan’ny hoe mandray anjara amin’ny fiainana voavotra omen’Andriamanitra antsika ao amin’i Jesosy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina? Izany dia midika hoe miaina fiainana kristiana marina sy marina amin’ny alalan’ny ohatra amin’ny fanompoana tsy misy fitiavan-tena ny mpiara-belona amintsika. Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’Andriamanitra, ka tsy momba ny tenanareo ianareo? Fa voavidy lafo ianareo; koa miderà an’Andriamanitra amin’ny tenanareo »(1. Korintiana 6,19- iray).
Nanavotra antsika tamin’ny alalan’ny asa fanavotana nataony i Jesosy ary nahazo antsika ho fananany. Rehefa avy nanamafy izany fahamarinana izany isika tamin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa Kristy, dia mamporisika antsika i Paoly mba hiaina izany fahamarinana izany, dia ny fiainana vaovao navotsotra tamin’ny fahotana. Nampitandrina ny apostoly Petera fa hisy mpampianatra sandoka toy izao: “Handeha amin’ny hafetsena ny fampianaran’ny antokom-pivavahana izay mitarika ho amin’ny fahaverezana, ka dia handa ny Tompo sy ny Mpitondra izay nividy azy ho fananany.” (2. Petrus 2,1). Soa ihany fa ireo mpampianatra sandoka ireo dia tsy manan-kery tanteraka hanalana ny tena maha-izy an’i Jesosy sy izay nataony ho antsika. “Jesosy Kristy nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanavotany antsika amin’ny tsi-fahamarinana rehetra sy hanadiovany ny tenany ho olona nazoto tamin’ny asa tsara.” (Titosy) 2,14). Io fanadiovana io, izay avy amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny asa fanompoan’ny Fanahy Masina tsy tapaka, no ahafahantsika miaina ny fiainana voavotra ao amin’i Jesoa Kristy.
Nanazava toy izao i Petera: “Fa fantatrareo fa tsy volafotsy na volamena mety ho simba hianareo, araka ny fanaon’ny razana, no hanavotana anareo amin’ny fitondran-tena maloto, araka ny fanaon’ny razana, fa ny ra soan’i Kristy, toy ny Zanak’ondry tsy manan-tsiny sy tsy misy tsiny.” (1. Petrus 1,18- iray).
Io fahalalana io no ahafahantsika mahatakatra tsara ny maha-zava-dehibe ny Fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Ilay Zanak'Andriamanitra Mandrakizay dia tonga tamintsika tamin'ny endrika olombelona rehefa nanaiky ny toetrantsika olombelona izay niova ho antsika izy ary ankehitriny mizara antsika amin'ny alàlan'ny Fanahy. Avelany hanana ny fiainana navotana isika.
Ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy no ivon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ny fanaterana indray na "ny ateraka avy any ambony" dia ilay fanavotana nataon'i Jesosy ary namboarina tamin'ny alalàn'ny Fanahy Masina ao amintsika.
« Fa rehefa niseho ny fahamoram-po sy ny fitiavan’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, dia namonjy antsika Izy - tsy noho ny asa izay ho nataontsika tamin’ny fahamarinana, fa araka ny famindram-pony - tamin’ny fandroana ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana ao amin’ny Fanahy Masina. Izay nomeny dia nalatsaka be dia be ho antsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika, mba ho tonga olo-marina noho ny fahasoavany isika, ka ho mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay” (Titosy). 3,4- iray).
Amin'ny alàlan'ny fanahy tsy manam-paharoa, isika dia afaka mizara ny maha-olombelona an'i Jesosy. Midika izany fa mizara ny zanany sy ny fiarahana ary ny fiarahana amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika. Ireo Rain'ny Eglizy tany am-boalohany dia nametraka izany toy izao: "Jesosy, izay nateraky ny Zanak'Andriamanitra, dia tonga Zanak'olona, ​​ka isika, izay nateraky ny olombelona dia nateraky ny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra".
Rehefa manolo-tena amin’ny asan’i Jesosy sy ny Fanahy Masina isika ka manolotra ny fiainantsika ho Azy, dia ho teraka ao amin’ny fiainam-baovao izay efa voavoatra ho antsika ao amin’ny maha-olombelona an’i Jesosy. Io fahateraham-baovao io dia tsy hoe mampiditra antsika ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra amin’ny lafiny ara-dalàna fotsiny, fa amin’ny alalan’ny fahaterahana indray ara-panahy dia mizara ny maha-olombelona an’i Kristy isika. Manao izany isika amin’ny alalan’ny asa fanompoana mitohy ataon’ny Fanahy Masina. Hoy i Paoly: “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro efa tonga ny vaovao »(2. Korintiana 5,17).
Tao amin’i Kristy no nahariana antsika indray ary nomena ny maha-izy azy vaovao. Rehefa mandray sy mamaly ny fanompoan’ny fanahy mitoetra ao anatiny isika dia teraka avy any ambony. Noho izany dia tonga zanak’Andriamanitra isika izay miombona amin’ny maha-olombelona an’i Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Izao no nosoratan’i Jaona ao amin’ny Filazantsarany: “Fa izay nandray Azy sy nino Azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak’Andriamanitra. Tsy tonga toy izany izy ireo satria anisan’ny olom-boafidy, na dia tamin’ny alalan’ny torontoronina sy ny fahaterahan’olombelona aza. Andriamanitra irery ihany no nanome azy ireo izao fiainana vaovao izao » (Jao 1,12-13 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Amin’ny maha-teraka avy any ambony sy ekena ho zanak’Andriamanitra, dia afaka miaina ny fifandraisana vaovao sy mihavana amin’Andriamanitra isika, dia ny fiainana voavotra ao amin’i Kristy. Izay nataon’i Jesosy ho antsika amin’ny maha-Zanak’Andriamanitra sy Zanak’olona antsika no miasa ao anatintsika mba hahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika amin’ny alalan’ny fahasoavana. Andriamanitra no mametraka ny mpino ao anatin'io fifandraisana vaovao io amin'ny tenany - fifandraisana izay misy fiantraikany amintsika hatrany am-pototry ny tenantsika. Toy izao no namolavolan’i Paoly izao fahamarinana mahagaga izao: «Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana izay hatahoranareo indray; fa efa nandray ny fanahin'ny fahazazana ianareo, izay iantsoantsika hoe: Aba, ray malala ô! Ny Fanahy dia manambara amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika » (Romana 8,15- iray).
Io no fahamarinana, ny zavamisy momba ny fiainana navotana. Andao hankalazantsika ny drafitry ny famonjeny be voninahitra ary hidera amim-pifaliana ilay Andriamanitra Trio, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.